စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သီချင်းအခွေအသစ် ထွက်တော့မှာလား?
On February 22, 2018 February 22, 2018 By Angel
မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အသဲကျော် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Facebook လောကကို ကိုင်လှုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ အနုပညာလောကထဲမှာ ဆယ်စုနှစ် ၂စုလောက် ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုကို ယနေ့ထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်စာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးကနေရာယူနေတဲ့ သူတစ်ဦးအဖြစ်လည်း ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းပေါင်းမြောက်များစွာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်စိုင်းစိုင်းကတော့ ၂၀၁၆ မှာ SAI Cosmetix ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သီချင်းဘက်ကို ဦးမလှည့်နိုင်ခဲ့တာလည်း ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းအခွေကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က “ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ” အခွေဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကုန်ထိ အသစ်ထွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ (22.2.2018) မှာတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ personal facebook အကောင့်မှာ ” Sai Sai is Sai Sai, Coming soon ” ဆိုပြီး ပုံတစ်ပုံကို Cover photo အဖြစ်တင်ပြီး share လိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ စိုင်းစိုင်း fan အားလုံးကတော့ သီချင်းခွေအသစ်လား? ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဆိုပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ မကြာခင်ကျရောက်လာတော့မယ့် April လ ၁၀ရက်နေ့ဟာ စိုင်းစိုင်းရဲ့ (၃၉) နှစ် ပြည့်တဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် မွေးနေ့တိုင်း Show ပွဲတွေလုပ်ရင်း သီချင်းခွေအသစ်ထွက်လေ့ရှိတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ activity တွေကိုတော့ ပရိသတ်အားလုံးက မျှော်လင့်စောင့်စားနေကြဆဲပါ။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့သော ထွက်ရှိဖူးတဲ့ Music Album များ –
“ချောကလက်ရောင် ရေခဲအိပ်မက်” (2000)
“သူငယ်ချင်း များစွာ” (2001)
“ဖေဖော်ဝါရီ မှတ်တမ်း” (2003)
“စိုင်းစိုင်း ဟု ခေါ်သည်” (2005)
“အမြဲတမ်း ဂေါ်လီ” (2009)
Music NewsSai Sai Kham Leng
PREVIOUS POST Previous post: G Fatt နဲ့အတူ Profile Pic လေး ဆင်တူလိုက်ပြောင်းကြမယ်
NEXT POST Next post: iKON အဖွဲ့ရဲ့ Bobby က YG Entertainment ရဲ့ စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုတွေအကြောင်းပြောပြခဲ့